Amaqhinga angama-20 ecommerce okunyusa ukuthengisa ngeeholide | Martech Zone
Amaqhinga angama-20 ecommerce okonyusa ukuthengiswa kweeholide
NgoLwesihlanu, Novemba 1, 2013 NgoLwesibini, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Abantu Volusion Baqikelela Ukwanda ngama-20% kwintengiso yeeholide ezikwi-Intanethi kumashishini amancinci ukuya kwinqanaba eliphakathi kwi-intanethi ngeli xesha lonyaka!
Ulufumana njani uninzi ngeli xesha libalulekileyo leholide ngaphandle kokutshisa uhlahlo-lwabiwo mali? Yiya kumdlalo ngesicwangciso esomeleleyo kwaye uthengise, uthengise, uthengise. Sele siza kungena kwelona xesha lihle kakhulu kwi-ecommerce. Volusion udale ezi ngcebiso ukonyusa impumelelo yakho.
Cards Cards - bonisa ngokucacileyo amakhadi ezipho kunye nezatifikethi zezipho kwiphepha lakho lasekhaya kwaye wenze udidi lwabo- ngaphezulu kwe-2/3 yabathengi banike amakhadi ezipho kunyaka ophelileyo. Xa uthumela amakhadi ezipho okanye izatifikethi, faka ibhokisi ehonjisiweyo enokusongelwa kwaye inikwe njengesipho. Musa ukoyika ukuhlawulisa okungaphezulu koku.
Ukuhamba ngobusuku -Fumana abathengi bokugqibela ngomzuzu wokubonelela ngenketho yokuhambisa ubusuku bonke kubathengi ukuze bafumane iipakethe zabo ngokukhawuleza. Xelela abathengi kwiphepha lakho lasekhaya usuku lokugqibela abanoku-odola ngalo kwaye bafumane iphakheji yabo ngexesha leeholide ezinkulu. Jonga ngomboneleli wakho wokuhambisa ngenqanawa ukuze ubone ukuba akukho manqanaba matsha na ahlawulelwayo akhoyo. Ukuba kunjalo, ungathoba iindleko zeshishini kunye nabathengi. (Khumbula ukuba nge-18 kaDisemba nguSuku lweSizwe lokuHanjiswa ngokuSimahla ngokusemthethweni. Cinga ngokubonelela ngenqanawe ngokukhululekileyo ngolu suku ukuze uhlale ukhuphiswano kufutshane neeholide.
Ukuchukumisa okukhethekileyo -Nika umbuliso ofudumeleyo kwaye ukhuthaze nawaphi na amathuba athengisayo kwiphepha lakho lombulelo nje ukuba abathengi babeka iodolo okanye babhalisa kwincwadana yakho. Faka ikhadi ngaphakathi kwibhokisi yokuhambisa xa uthumela abathengi iodolo yabo. Ukuba unexesha, yenza inqaku elibhaliweyo ngesandla ngesaphulelo ngaphakathi. Oku kuyakunika abathengi bakho imvakalelo efudumeleyo, engacacanga kwaye ubakhuthaze ukuba babuyele ngaphezulu!
Iveni evenkileni -Nika ukhetho lokugcina evenkileni ukuba unendawo yokuthengisa. Oku kuyakukugcina kunye nemali yomthengi yakho kwiirhafu zangaphandle zokuhambisa.
Ukuhambisa simahla -Cinga ngokuhambisa simahla izinto ezibuyisiweyo. Ukuba le nto ngqo ngaphandle kwincwadi yokudlala yeZappos, kodwa ngumbono owenza ukuba abathengi bazithembe ngaphambi kokucofa Thenga ngoku iqhosha. Cinga ukwandisa ixesha lokubuya ngexesha leholide ukunceda ukunciphisa iintloko zakuba ziphelile iiholide.
Yenza ukungxamiseka -Bala ukubala ukubuyela kumakhasi akho okufika kunye nephepha lasekhaya elibonisa ukuba zingaphi iintsuku ezisele kude kufike iiholide ezibalulekileyo. Beka ixesha elimiselweyo lokuhambisa ngokuthe ngqo kumbhalo wentengiso ye-PPC. Umzekelo, zama into enje, Ukuhanjiswa simahla ngaphandle (faka umhla)!
Ukuhobisa -Yongeza uhlobo oluthile loyilo oluneeholide kwi-logo yakho okanye usebenzise iphulo losasazo lwentlalo elicela abalandeli bakho kunye nabalandeli ukuba bangenise ii-logo ezingumxholo wenkampani yakho. Ezinye iimbono zibandakanya ukuxhoma isebe le-holly ngaphezulu konobumba okanye ukutshintsha ilogo yakho ukubandakanya izibane zeKrisimesi okanye umnqwazi waseSanta. UGoogle uyenza rhoqo le nto kwimicimbi eyahlukeneyo kwaye yongeza ulonwabo, ukubamba uphawu kuhlobo lwakho. Cwangcisa umhla njengomhla obekiweyo wokuba uyilo lwakho lweholide lususwe kwindawo yakho, uqiniseke ngokugcina imifanekiso kunye nekhowudi yakho kunyaka olandelayo. Awufuni ukuba ngummelwane we-tacky ongaze athabathe izibane zabo.
Yenza iNkcazo -Jazz up umxholo wenkcazo yemveliso yakho. Umzekelo, Isipho esigqibeleleyo sayo nayiphi na indoda, nkqu nabo kunzima ukukholisa, inomtsalane ngakumbi kunodweliso lobuchwephesha.
IziKhokelo zeZipho -Yila iinyanda okanye iibhasikithi zezipho zeemveliso zakho kwaye uzenzele udidi oluthile kuzo. Unokubeka ezi bundle kwezinye iindidi osele unazo. Thetha ngokuthengisa umnqamlezo!
zobuqu -Vumela abathengi bakho ukuba babandakanye amanqaku awodwa ezipho xa usenza iodolo. Ungazenza zibeke oku kumanqaku e-odolo okanye wenze umhlaba owenziwe ngokwesiko kwiphepha lakho lokukhangela olo thintelo longezelelekileyo. Nika izongezo ezizezakho kwiimveliso zakho, ezinje ngokukrolwa okanye ukuhonjiswa, ukuba kufanelekile.
Buyisa -Zama iphulo apho unikezela ngepesenti ethile yentengiso kwisisa sendawo, njengo-Matshi weDimes. Wonke umntu uyathanda ukubuyisa, ke yenza kube lula kubathengi bakho ukuba benze njalo.
Ukuthengisa iiholide -Thathela ingqalelo ukunikezela ngentengiso apho abathengi bafumana ikhadi lesipho ukongeza kwixabiso elithile leodolo. Umzekelo, ukuba umthengi uchitha i- $ 50, bafumana ikhadi lesipho lesi- $ 5. Ukuba bachitha i-100 leedola, ikhadi lesipho le- $ 10, njl. Le yeyona ndlela ilungileyo yokubuyisela abathengi kwivenkile yakho.
Ukusonga isipho -Nikezela ngesipho sokusonga samaxabiso okanye esincitshisiweyo ukunceda abathengi kwipinki. Kwaye qiniseka ukuba ulayisha ephepheni kunye neteyipu!
Izaphulelo zodwa -Nikezela ngezaphulelo ezizodwa kuLwesihlanu oMnyama (usuku emva koMbulelo) kunye noMvulo weCyber ​​(ngoMvulo wokuqala emva kombulelo). Zombini ezi ziintsuku ezinkulu zokuthengisa kwi-Intanethi.
Hlela Zama iphulo apho ufihla umfanekiso omncinci wento ethile, njenge logo yakho, nzulu kwelinye lamaphepha akho. Nika isipho kwinani elithile labasebenzisi abasifumana kuqala. Oku kuyakukhuthaza abantu ukuba bahambe kuyo yonke indawo yakho kwaye babachaze ngakumbi nangakumbi kwiimveliso zakho.
email Marketing -Thumela i-imeyile kubo bonke abathengi bakho ngokubabulisa okhethekileyo ukuba enkosi kwishishini labo. Oku kuya kubakhumbuza ukuba bahlawule indawo yakho xa befuna izipho. Tsala uluhlu lweenqwelo ezilahliweyo veki nganye kwaye uthumele isikhumbuzi kwaba basebenzisi ukuba babuye bazokugqibezela ukuthenga kwabo. Khanyisa incwadi yakho yokubhalisa ukuze wandise inani labafowunelwa onalo. Khumbula, ukuphinda abathengi kubiza kakhulu ukulawula kunokufumana abatsha. Emva kokuba abathengi benze ukuthenga kwabo okokuqala, thumela incwadana yeendaba ekhethekileyo ebonisa zonke iimveliso zakho ezithandwayo kwaye kubandakanya nesaphulelo "somthengi omtsha". Akukaze kube kudala kakhulu ukuqala ukwakha ukuthembeka kwabathengi.
Live Support -Nyusa inkxaso yakho ngokuchitha iiyure ezingakumbi kwincoko ebukhoma nakwifowuni ukuphendula nayiphi na imibuzo. Yandisa ubuntu bakho kwiimpawu zonke zabathengi. Ukuba unendawo yokufowuna, qiniseka ukuba uphendula umnxeba ngombuliso oqwalaselweyo okanye ufake umyalezo onophawu kwimodyuli yakho yengxoxo. Nabathengi abangonelisekanga abanakho ukwala umnqweno-okuhle. Yazi inkqubo yakho yoku-odola ukuba awukabikho-abanye abantu bakhetha ukufowunela kwaye babeke iodolo yabo emva kokubuza imibuzo embalwa.
Intengiso ehlawulelweyo - Ngexesha leeholide, hlengisa imikhankaso yakho ye-PPC ukuze ubandakanye amagama aphambili ahambelana neeholide, anje Izipho or izipho. Nyusa ukhuphiswano lwakho lwe-PPC. Abathengi abanokubakho bajonge ukuchitha imali encinci ukufumana imveliso egqibeleleyo, ke kuya kufuneka uzimisele ukuchitha imali encinci ngokukhulisa ubuncinci bemihla ngemihla kwi-PPC. Ngokuthelekisa ukuthenga ekunyukeni, ebhalwe kakuhle, isicatshulwa sentengiso esinokubamba ukuthengisa kwintengiso. Yenza isicatshulwa sakho se-PPC kunye namagama aphambili ukujolisa kubathengi abafuna izimvo zezipho zabathandekayo. Umzekelo, sebenzisa igama elingumxholo elithi "izipho zikaTata" kunye nekopi yentengiso equka iingcebiso ezinje, "Sinezipho zeholide zamadoda afana neewotshi, iiglavu zegalufa kunye neetayi ezingaphantsi."
Iinjongo zophando -Thumela kwakhona imephu yakho yesiza kungekudala kuneemveliso ezintsha kunye neendidi ukuze iinjini zokukhangela zikwazi ukubekisa kunye nokuzibeka ngaphambi kokuba ixesha lokuthengisa liqale. Yomeleza kwaye uhlengahlengise iinkcazo zeemeta kwiindidi kunye neemveliso ezidumileyo ukuze ubandakanye amagama aphambili aya kuthi ancede inqanaba lephepha lodidi lwakho kunye namaphepha emveliso. Lungisa umxholo wakho wephepha lasekhaya kunye / okanye ukope ukubonisa abathengi ukuba uyindawo efanelekileyo yokuthenga izipho, uqiniseke ukuba ubandakanya amagama aphambili afanayo naphambi koko ukuze ungalahli umhlaba kwizikhundla zakho ezikhoyo.
Bandakanya iMidiya yoLuntu -Yila ngokutsha amajelo akho eendaba ezentlalo, njenge-Twitter kunye ne-Facebook, ukuze ube yintsimbi kwaye uphawulwe. Yabelana ngezaphulelo zakho kunye nokuqaqambisa iimveliso ezibonisiweyo mihla le ngemithombo yeendaba zentlalo- oku kudala imeko yongxamiseko kwaye kunceda ukwandisa ukufikelela kwakho kwi-Intanethi. Zama umkhankaso wemidiya yoluntu apho ucela abathengi ukuba bangenise iividiyo, iifoto okanye iileta zokuba kutheni bezonwabela iimveliso zakho kunye neshishini. Nika abaphendulayo isaphulelo kwimveliso abazikhethele yona, emva koko basebenzise iikowuti kunye nemifanekiso kwiwebhusayithi yakho. Khumbula, ubungqina bukhulu kakhulu! Zama ukuvota kumajelo eendaba ezentlalo, ubuze, "Ukuba unokuba nento inye (faka igama lakho levenkile) ibiya kuba yintoni?" Emva koko landela ngokunika abaphenduli isaphulelo kwimveliso abayikhankanyileyo!
Khuphela uluhlu lonke lweVolusion Iingcebiso ezili-101 ze-Ecommerce zokuKhuthaza ukuThengiswa kweeholide!
Phawula: Sifake iqhagamshelo lethu lokudibana neVolusion kwinqaku lonke. IVolusion sisisombululo esikhokelayo se-ecommerce yamashishini amancinci ukuya aphakathi. Ukusukela ngo-1999, amawaka eenkampani asebenzise iVolusion ukuphumelela kwi-intanethi, umrhwebi ophakathi ethengisa ukhuphiswano, 3: 1.
tags: imeyile ye-ecommerceintengiso ye-imeyile yokuthengisaUkuthengiswa kwe-ecommerceamakhadi esipho ecommerceecommerce live live inkxasointengiso ye-ecommerceamacebo okukhangela ecommerceecommerce kwimidiya yoluntuamaqhinga ecommerceukwenza isipho ngokwakhoiindlela zeholide zorhweboiholide ecommerce yokuthengisaamacebo eeholideivolus
Douglas Karr Friday, November 1, 2013 Tuesday, January 12, 2021
Nxibelelana, Gamify, Qikelela kwaye uthelekelele ukuThengisa
I-Swirl: Ivenkile yeVenkile yokuGcina eSelfowni yaBathengisi abakhulu
Isoftware Inkampani yaseMalaysia
Nov 4, 2013 kwi-3: 02 AM
Ndicinga ukuba ezi zicwangciso ziya kuba ngcono ukuba ufuna ukwandisa ukuthengisa kwakho ngeholide. Ngokuqinisekileyo iya kunceda abo baqhuba iisayithi zeholide.